Maxaa ka jira in uu Khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland iyo Ku-xigeenkiisa? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in uu Khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland...
Maxaa ka jira in uu Khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland iyo Ku-xigeenkiisa?
Garowe (Halqaran.com) – Kaddib markii Khamiistii shalay uu madaxweynaha maamulka Puntland uu xilkii ka qaaday Taliye kuxigeenka Ciidanka Madaxtooyada Puntland, oo uu sidoo kale Magacaabay Taliyaha Ciidanka Madaxtooyada oo Sarkaalkii haayay uu is casilay iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa taasi ka horyimid Madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Qoraal lagu burinayo xilka qaadista iyo Magacaabistaas oo kasoo baxay Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa lagu sheegay in xilka qaadista taliye ku-xigeenka Madaxtooyada aan waxba ka jirin, isla markaana taliye ku-xigeenka Ciidanka Madaxtooyada Puntland uu yahay Gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Xarbi.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka dhawaajiyay sababta uu uga horyimid xilka qaadista lagu sameeyay Taliye kuxigeenka Ciidanka Madaxtooyada, ayaa sheegay, in ay tahay in aan lagala tashan Go’aanka Madaxweynaha Puntland.
Warka ka soo baxay Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa waxaa uu u muuqdaa mid khilaaf horleh ka dhex abuuraya Madaxweynaha Maamulka Puntland iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Halka hoose ka akhriso Warqadda Burinta: